Git Sangit News » कपाल झ’र्ने सम’स्याले पीडित हुनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
कपाल झ’र्ने सम’स्याले पीडित हुनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
काठमाडौँ । कपाल बढ्न छा्ड्नु र कपाल भाँचिनु कपाल झर्नुका मुख्य लक्षण हुन् । कपाल झर्ने समस्या अधिकांश मानिसको जल्दोबल्दो समस्या हो । महिला भन्दा पुरुष यो स’मस्याबाट पीडित छन् । प्राय अवस्थामा कपाल झर्ने स’मस्या कुनै रोग बा बाह्य तत्वसँग सम्बन्धित छैन ।
कपाल झर्नबाट रोक्न कस्तो खानेकुरा खाने त ?
ओमेगा ३ फ्याटी एसिडयुक्त खानेकुराले कपाल झर्नबाट रोक्छ । बदाम, टुना र साल्मोनमा यस्तो भिटामिन पाइन्छ । यी खानेकुरामा हुने पोषणले तपाईको कपाल झ’र्नबाट रोकिन्छ र निरन्तर बृद्धि हुन्छ । यसले कपालालाई बढी इलाष्टिक बनाउने र टुट्नबाट बचाउछ
जिंकयुक्त खानेकुराः चना, ओस्टर्स र बिफमा प्रशस्त जिंक पाइन्छ जसले कपालको तन्तुलाई बृद्धि गरि गुमेको कपाल पलाउन सहयोग गर्छ । जिंकले तपाईको टाउको र कपाल स्वास्थ्य बनाउछ । जिंकले कपाल बृद्धिका लागि आवशयक हर्मनको नियन्त्रण गर्छ । प्रोटिनः प्रोटिन कपालको लागि प्राथमिक पोषक तत्व हो । प्रर्याप्त प्रोटिन खाएमा तपाईलाई तालु खुइलिनबाट बचाउनुका साथै कपाल फुल्नबाट समेत जोगाउँछ ।
प्रकाशित मिति २० भाद्र २०७७, शनिबार १५:३६